Kitra – «Ligue des champions d’Europe 2016» : matahotra ny Atletico i Gérard Piqué | NewsMada
Kitra – «Ligue des champions d’Europe 2016» : matahotra ny Atletico i Gérard Piqué
Hiditra amin’ny dingana manaraka ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions”, taranja baolina kitra, anio. Hisantatra izany ireo ekipa roa voalohany eo amin’ny fifaninanam-pirenena espaniola.
Hanomboka amin’ity talata ity ireo lalao ampahefa-dalana mandroso, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa, eo amin’ny baolina kitra. Anisan’ny goavana amin’ireny, izay efa hiendrika lalao famaranana kely, sahady ny fihaonan’ny FC Barcelone sy ny Atletico de Madrid.
Adin’ny samy Espaniola ity hiseho ity. Mialoha ity fihaonana ity, miahotra sy feno fanahiana ilay vodilaharana sady kapitenin’ny Barcelone, Gérard Piqué, indrindra taorian’ny faharesen’izy ireo nanoloana ny Real de Madrid, ny asabotsy lasa teo. “Ekipa faharoa aty Espaina ny Atletico, ary tsy mora mihitsy ny miandry anay satria klioba manana ny maha izy azy sy sarotra resena ry zareo Atletico”, hoy izy. Marihina fa any Barcelone ny lalao mandroso.
Ankoatra izay, tsy mbola levona ao an-tsain-dry Messi sy ny namany mihitsy ny nanintsanan’ny Atletico de Madrid azy ireo, teo amin’ny lalao manasa-dalana, tamin’ny “Ligue des champions 2014”.
Tsiahivina fa mitarika eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Espaina na ny “Clasico”, ireto ekipa roa ireto. Manana isa 76 ny Barça arahin’ny Atletico, amin’ny isa 70.
Etsy ankilany, efa sitrana ary afaka hiatrika ity lalao hifandonana amin’ny FC Barcelone ity i Diégo Godin, vodilaharan’ny Atletico.
Hifampitady eo amin’ny famonoam-baolina izany, amin’ity, i Luis Suarez, ho an’ny Barça, sy Griezmann, ho an-dry zareo Madrilènes.
Ho an’ny lalao ilany kosa, hampiantrano ny Benfica de Lisbonne ny Bayern de Munich. Lalao izay heverin’ny rehetra fa tsy hampanano sarotra an-dRainiboto ny handavo an-dry zareo Portiogey.